သက်တမ်းအတွက်တစ်လလျှင် 1 ယူရိုဖြင့် 22 Gb / s ဖိုင်ဘာကမ်းလှမ်းမှုရှိပါသလား။ ၎င်းကို RED - Tech - Numerama - TELES RELAY တွင်တွေ့နိုင်သည်
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom »သက်တမ်းအတွက်တစ်လလျှင် 1 ယူရိုဖြင့် 22 Gb / s ဖိုင်ဘာကမ်းလှမ်းမှု? ၎င်းသည် RED - Tech - Numerama တွင်တည်ရှိသည်
သက်တမ်းအတွက်တစ်လလျှင် 1 ယူရိုဖြင့် 22 Gb / s ဖိုင်ဘာကမ်းလှမ်းမှုရှိပါသလား။ ၎င်းသည် RED - Tech - Numerama တွင်တည်ရှိသည်
Tele RELAY တစ်ခု7နိုဝင်ဘာလ 2019
SFR မှ RED သည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဖိုက်ဘာကြိုးအင်တာနက်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ 22 ယူရိုကို ၀ ယ်ယူသူသည်၎င်း၏ download speed သည် 1 Gb / s သို့ ၀ ယ်ယူသူအသစ်များအတွက်အပိုကုန်ကျစရာမလိုပါ။
နိုဝင်ဘာလ 12 မကုန်မှီ, SFR မှ RED မှအခမဲ့နှုန်းအခမဲ့ option ကိုအခမဲ့ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့်ဖိုင်ဘာကမ်းလှမ်းမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည် များသောအားဖြင့်5ယူရိုမှာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဤရွေးချယ်မှုဖြင့်သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုအမြန်နှုန်းသည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် 1 Gb / s နှင့် 400 Mb / s သို့ရောက်ရှိနိုင်သည် အပ်လုဒ်ကိုဤငွေထုတ်ရန်အတွက်သင့်လိုင်း၏အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုနှင့်ပတ်သက်သည်။
1 ယူရိုဖြင့်သာ 22 Gb / s ဖိုင်ဘာ
SFR မှ RED သည် ၄ ​​င်း၏ဖိုင်ဘာကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သော Debit Plus အားထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှုန်းကိုပေးနေပါသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုသည် 22 ယူရို၏စျေးနှုန်းဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲဤနှုန်းသည်ခြွင်းချက်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကဆိုလိုတာက ပထမ ၁၂ လအပြီးမှာယူသည့်စျေးနှုန်းသည်နှစ်ဆမည်မဟုတ်ပါ အခြားအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အဖြစ်များလေ့ရှိသည်။ သင်အပ်နှံနိုင်သည့်ငွေကိုတွက်ချက်ရန်သီးသန့်စာမျက်နှာတစ်ခုကခွင့်ပြုသည် သင်၏ subscription ကိုစျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ပေးဆောင်ခြင်းဖြင့်သင်၏ box ADSL or Fiber.
အဆိုပါဖိုင်ဘာကြေးပေးသွင်း 22 ယူရိုမှာ SFR မှအနီရောင် အရာအားလုံးပါဝင်သည် ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်လျှို့ဝှက် option ကိုမ။ ဆိုလိုသည်မှာ
download လုပ်ရန် 1 Gb / s အထိအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခု၊ အပ်လုဒ်ကို
ကမ်းလှမ်းချက်သည်အခြေခံကျပြီးသားဖြစ်ပါကရွေးချယ်မှုအမျိုးမျိုးသည်လူကြီးမင်း၏မျှော်လင့်ချက်များကိုအကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းရန်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
တစ်လလျှင် 35 ယူရိုအထိ2တီဗီလိုင်း (TNT) တစည်း (set-top box ပါဝင်သည်)
တီဗီမှ 100 ယူရိုအထိတစ်လလျှင်4လိုင်းများ (TNT + နိုင်ငံတကာလိုင်းများ) ၏ပန်းစည်းတစ်လုံး (ဒီကုဒ်ဒါပါ ၀ င်သည်)
RMC Sport ပန်းစည်းသည်တစ်လလျှင် 19 ယူရိုဖြင့်သေတ္တာထဲတွင်တိုက်ရိုက် (တစ်နှစ်အာမခံခြင်းဖြင့်)
ကမ်းလှမ်းချက်သည်သင့်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကယခုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူကြောင်းသိထားပါ။ လက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုချက်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာအားဖြင့်ပယ်ဖျက်ခြင်း၏အက္ခရာများထွက်ရန်၊ ယခု ISP အသစ်သည်အဆင့်အားလုံးကိုဂရုစိုက်သည်။ ၎င်းအားသာချက်ကိုရယူရန်တစ်ခုတည်းသောအခြေအနေမှာ RIO ID ကိုပေးခြင်းဖြင့်ကြိုးဖုန်းနံပါတ်သယ်ဆောင်ရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်သည် SFR အားဖြင့်အနီရောင်စာရင်းသွင်းတဲ့အခါ။ ၎င်းကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည် 3179 သက်ဆိုင်ရာလိုင်းကနေ။ ဒါဟာခွင့်ပြုထားတဲ့ဒီအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ် တူညီသောဖုန်းနံပါတ်ထားပါ ISP ကိုတစ်ပြောင်းလဲမှုကာလအတွင်း။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မှတ်သားသင့်သည်မှာ SFR မှ RED သည်ဖောက်သည်အသစ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုသတိပြုပါ ဖျက်သိမ်းမှုကြေးယူရို 100 ပြန်အမ်း အော်ပရေတာအဟောင်းကနေ။ ဒီအားသာချက်ကိုရယူရန်ဖောက်သည်အသစ်သည် SFR မှ RED သို့သူ၏ကမ်းလှမ်းချက်အဟောင်း၏ခြံစည်းရိုးငွေတောင်းခံလွှာများကိုမိတ္တူတစ်စောင်ပို့ရမည်။ ငွေပြန်အမ်းငွေကိုအနာဂတ်ငွေတောင်းခံလွှာများပေါ်တွင်,5ရက်သတ္တပတ်အတွင်းပြန်အမ်းငွေတောင်းခံမှုကိုလက်ခံရရှိသည်။
တွစ်တာ ၀ န်ထမ်းဟောင်းနှစ် ဦး သည်ဆော်ဒီအာရေဗျကိုထောက်လှမ်းရေးအတွက်တရားစွဲဆို
ဘာကြောင့် Google Chrome သည်အချို့ပုံရိပ်များနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့လိမ့်မည်နည်း
Maurice Kamto ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်မလား။
DRC - အဒေါ့ဖ်မူဇီတို - "Lamuka သည် monolithic block မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားခြားနားသောခံစားချက်များရှိသည်" - JeuneAfrique.com
ဂျိုဟန်နက်စ်ဘာ့ဂ်တွင်အာဖရိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖိုရမ်သည် JeuneAfrique.com ၏အခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးတက်ရန်ကြိုးစားနေသည်
သိကောင်းစရာများ - 37 ဘာလဲဆိုတာသင့်ကိုသက်သေပြနိုင်မယ့်သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ
ဤ $ 38 သော့ချိတ်သည်သင်၏ Apple Watch ဘက်ထရီဘယ်တော့မှသေဆုံးလိမ့်မည်ကိုအာမခံသည် - BGR
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်299
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်7,461
TECH & Telecom2,585